အိုးဝေ: June 2008
Austria - Poland နဲ့ ပွဲနေ့
At Praterstern Underground (12.6.08)
Posted by Pingu at 4:08 PM Links to this post 1 comments
Posted by ဖိုးသောကြာ at 12:34 AM Links to this post 10 comments
Posted by ဇနိ at 10:02 PM Links to this post 13 comments
အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ “သူ”ဆိုသောမိန်းကလေး။ ။
Posted by မောင်ဖြူ at 2:03 PM Links to this post 11 comments
Posted by မေအောင် at 7:52 AM Links to this post 11 comments
အခုတလော ကျနော်နဲ့မဇနိ အဆင်မပြေကြပါဘူး။ မဇနိတယောက် ကျနော့်ကို တတွတ်တွတ်နဲ့ အပြစ်တွေတင်နေတာပါ။ သူမက “ရှင့်ကြောင့်လေ ရှင့်ကြောင့်”တဲ့။ ကျနော်ကလည်း “ဟာကွာ ငါ့ကြောင့်ချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူးဟ။ တခြားလူတွေလည်း ရှိတာပဲ။ သူတို့ကိုလည်း ပြောဦးမှပေါ့” ဆိုတာလည်း သူမက မရပါဘူး လူရင်းဆိုတော့ ကိုယ့်ပဲ နာနာနှက်နေတော့တာပေါ့။ ခက်တော့တာပဲ။ ကျနော်လည်း ဘယ်သူ့ပြန်နှက်ရမှန်းမသိတော့ အဲဒါကြောင့် ဒီ ဂူဂယ်ကို ခက်တယ်ပြောတာပေါ့။ ရှိရှိသမျှ အကုန်အလကားပေးနေ။ အလကားရတော့ လက်အငြိမ်မနေနိုင်။ အလကားရတဲ့ ဇော်ဂျီကို အင်စတောလုပ်ပြီး ဘလော့ဂင်းနေမိတာပေါ့။ (ကျေးဇူးရှင်တွေကို စိတ်ထဲက စော်ကားသေးတာ။) ဘလော့ဂင်းနေတော့ ဘလော့ဂ်ကို လာလည်တဲ့သူ နည်းရင် ဒီပြဿနာကပေါ်လာတာပဲ။
ဘလော့ဂ် လူလာနည်းလို့ အပြစ်ပြောမယ်ဆိုလည်း ပြောလောက်ပါတယ်။ အခုဖြစ်နေတာက ဘယ်အချိန်ရိုက်သတ်သတ်ရတယ်၊ အဲဒါ ကိုယ်ခြံထဲက ကြက်လို့ ယူဆထားတဲ့ ကိုမောင်ဖြူတို့၊ ကိုမောင်လုံးတို့ကတောင် ဒီဘလော့ဂ် ဘက်ကို ခြေမချ၊ ခြေဦးမလှည့်တော့ပါဘူး။ ရေးဖော်ရေးဖက် စစ်ကိုင်းသူနဲ့ မမေအောင်တို့ကလည်း ဘယ်နေရာမှာပျော်မွှေ့နေပြီလဲ။ ခြေရာတွေပျောက်နေပါရောလား။ သံယောဇဉ်များ ဖြတ်နိုင်လိုက်ကြတာ ကိုပီဆာကျယ်နဲ့ ကိုအန်အေဆိုတာ ယောင်လို့တောင် လှည့်ကြည့်ရဲ့လားမသိ။ စာရေးကောင်းလို့ ခေါ်ထားရတဲ့ ကိုလူအေးကလည်း ဘလော့ဂ်ကို အရှင်လတ်လတ်နဲ့ ဖြတ်ထားရစ်ခဲ့ပြန်တယ်။ သံယောဇဉ် ဖြတ်ပြီး ကွန်ထရီဗြူတာလစ်(စ)ကတောင် ထွက်နိုင်သေးတာ၊ အလည်လည်း ရောက်တော့မယ်မထင်ပါဘူး။ ကိုသောကြာကလည်း စီဘောက်မှာ တချက်တချက်ပေါ်တော်မူလာပြီး ခွေးလှည်းလေး စီးတဲ့အခါ စီးရဲ့။ သူလည်း ကြာကြာမနေပါဘူး။
ဘလော့ဂ်မှာ ကိုယ်ရေးထားတာလေးတွေ လာဖတ်သူတွေများတယ်ဟ၊ အဲ ကွန်မန့်တွေ တပုံကြီးရတယ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ရတာက ဘလော့ဂင်းရဲ့ အရသာလေ။ စီဘောက်မှာ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးရေးသွားတာ မဟုတ်တောင် လာလည်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ လည်လည်လာပါတယ်ရှင့် ဆိုပြီး နှုတ်ဆက်သွားတယ်ဆိုရင်တောင် ပျော်နေရတာမဟုတ်လား။
နောက်တချက်ခက်တာက ကျနော်က မဇနိကို statcounter ဘယ်လို့ကြည့်ရတယ်ဆိုတာကို သင်ပေးထားတာဆိုတော့ သူမက ဘယ်လို အိုင်ပီ အဲဒရက်(စ)နဲ့လာရင် ကျော်ခွလာတာ၊ statcounter ထဲမှာ ပေါ်တဲ့ အိုင်ပီကို စီဘောက် အိုင်ပီနဲ့တွဲတိုက်ဆိုင်ပြီး ဘယ်သူလာတယ်ဆိုတာကို label ထိုးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေပါ သင်ပေးထားတော့ ဒီနေ့ဆို ဘယ်သူတွေလာတယ်၊ Visit Length က ဘယ်လောက်ရှိတယ်၊ Returning Visits က ဘယ်လောက်၊ Page Loads တွေ၊ Unique Visitor တွေ၊ Returning Visitors လည်း အကုန်သိနေတာကိုး။ ဒီတော့ ဘားဂရပ်ကြီးထိုးကျနေရင် ကျနော့်ကို ပြောတော့ ဆိုတော့တာပဲ။ ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲ ဒီလို အလကားဖတ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ဘလော့ဂ်တောင် လူများများ လာအောင် မစည်းရုံးနိုင်ဘူး၊ အဲ နောင်အချိန် တူနှစ်ကိုယ်ဘ၀မှာ စီးပွားရှာ ဈေးဆိုင်တွေများ ဖွင့်ရင် ရှင်ဘယ်လိုလုပ်စားမလဲတဲ့။ အိမ်ဦးနတ်လောင်းကြီးကို သူမိုလို့ ပြောရက်လိုက်တာ။ ဒီကလည်း ဘယ်ခံနိုင်မလဲ။ ဟေ့ မင်းကလည်း ဒီဘလော့ဂ်က မင်းလည်း ဆိုင်တာပဲကွ။ မင်းလည်း နည်းလမ်းရှာကြံရမှာပေါ့။ မင်း အိမ်လည်များများထွက်ကွာ၊ ကွန့်မန့်တွေရေး၊ စီဘောက်တွေမှာ လိုက်နှုတ်ဆက်ဆိုတော့ ကျမလည်း သွားတာပဲ။ တခါတခါ အလုပ်ရှုပ်တော့ အမြဲကျလည်း မသွားနိုင်ဘူးပေါ့တဲ့။ ရှင့် ကိုဖြူတွေ၊ ကိုလုံးတွေကို ခိုင်းပါ့လားတဲ့။ ဟ မင်းကလည်း ဘယ်နတ်မိမယ်တွေက ဟိုကောင်တွေကို ဘယ်လိုထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာ မင်းသိလို့လား။ တော်ကြာ သူများတွေ အကွဲကွဲ အပြဲပြဲဖြစ်နေဦးမယ်လို့ပြောရတယ်။
ဒီတော့ ဥာဏ်ကြီးရှင် မဇနိက သူတို့ဆီက ဈေးဆိုင်တွေမှာ ဈေးအရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်သလို ဘလော့ဂ်အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလုပ်မယ်တဲ့၊ ဟာ မင်းကလည်း ဟုတ်သေးပါဘူး။ ဘလော့ဂ် လူလာမြှင့်တင်ရေးလုပ်မယ်လုပ်စမ်းပါဆိုပြီး လူလာများအောင် စပြီး စဉ်းစားလာကြရတယ်။ မင်းတို့ဆီက ဈေးဆိုင်တွေက ဘယ်လိုလုပ်တာလဲ ပြောစမ်းပါဦးဆိုတော့ သူမက သူမဆီမှာ ရှိတဲ့ point card လေးကို ထုတ်၊ ဓာတ်ပုံရိုက်ပြီး ပို့ပေးတယ်။ ပြီး ရှင်းပြလေရော။ အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ၀န်းထမ်းလေသံနဲ့ သူမပြောနေတာကို ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါဦး။
ဒီကဒ်မှာတော့ အကွက် ၅၀ ကွက်ပြည့်ရင် ၅၀၀ ယန်း ပြန်သုံးလို့ရတဲ့စနစ်လေးလုပ်ထားတယ်။ အကွက်အကုန်ပြည့်မှ ယန်း ၅၀၀ ရမှာဆိုတော့ အကွက် ၅၀ ပြည့်အောင်ဝယ်ရတာလေ။ ဒီတော့ နောက်တခါလည်း ဒီဆိုင်မှာလာဝယ်ချင်စိတ်ပေါ်တာပေါ့။
ဒီကဒ်က gold point card ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့လိုက်အောင် အဖိုးတန်တဲ့ကဒ်ပါ။ သူက အီလက်တရောနစ်ပစ္စည်းဝယ်ရတာဆိုတော့ ၂၀ % လောက် ပွိုင့်ထည့်လိုက်ရင် အများကြီးဝင်နေတဲ့အတွက် သူ့ကိုတော့ မပျောက်အောင်သိမ်းတယ်။ သူကလည်း ၂၀% discount ကို ပိုက်ဆံမပေးဘူး။ သူ့ဆိုင်မှာ ပြန်ဝယ်တဲ့အခါ သုံးရတယ်။
အဲဒါတွေ ပြလည်းပြီးရော သူမက ဆက်ပြောတယ်။ ဒီလိုလုပ်မယ်လေတဲ့ ဒီဘလော့ဂ်ကို ဘယ်နှခေါက်(Returning Visits) လာသလဲဆိုတာရယ် ၊ ဘလော့ဂ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာနေသလဲ (Visit Length) ဆိုတာရယ်၊ comment ဘယ်နှခုရေးသလဲ၊ စီဘောက်မှာ ဘယ်နှကြိမ်အော်သွားစလဲဆိုတာပေါ်မူတည်ပြီး အလည်လာသူတွေအတွက် point card လေးတွေလုပ်ကြမယ်တဲ့။ ဒါမှ အပြင်မှာ ဈေးဆိုင်တွေမှာ ဈေးဝယ်သလို point တွေပြည့်တော့မှာ သွားထားမှ ဆိုပြီး ခဏခဏအလည်လာကြမှာတဲ့။ ကျနော်လည်း မင်းကတော့ အိုက်ဒီယာ ကောင်းသိပ်ထွက်ပဲ၊ အဲဒါတွေကြောင့် အကြင်နာပိုရတာဆိုတော့ အရေးထဲ အသားယူနေတယ်ဆိုပြီး ကျနော့်ဗိုက်ခေါက် လိမ်ဆွဲဖို့ အကြိမ်ရေးမှတ်ထားတဲ့ စာရွက်မှာ တာလီတချောင်းတိုးလိုက်သေးသတဲ့။
အိုက်ဒီယာကောင်းတော့ရပြီဆိုပြီး နှစ်ယောက်သား ပြုံးပြုံးကြီးတွေ လုပ်နေကြတာပေါ့။ ဟဲ ဟဲ တို့တွေလည်း စဉ်းစားတတ်တာပဲကွဆိုပြီး မာန်တတ်နေတဲ့ အပြုံးကြီးတွေနဲ့လေ။ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ၊ point card မှာ point တွေပြည့်တော့ တို့တွေက ဘာအခွင့်အရေးတွေပေးမှာတုန်းဆိုတော့ အရေးအကြီးဆုံး အိုက်ဒီယာ ကျမပေးပြီးပြီ၊ ကျန်တာတော့ ရှင်စဉ်းစားတဲ့။ ခက်တော့တာပဲ ဒီက ထူပါတယ်ဆိုမှ။ ကဲဟာ ဒါဆိုဒီလိုလုပ်မယ်။ point card ပြည့်သွားတဲ့ မိန်းကလေး visitor တွေဆိုရင် လူပျိုကြီး မောင်ဖြူရဲ့ဓာတ်ပုံပြမယ်၊ ဂျီတော့မှာ မောင်ဖြူနဲ့ ချက်ခွင့်ပေးမယ်။ ဟီးဟီး။ အဲ point card ပြည့်သွားတဲ့ ယောက်ျားလေး visitor တွေအတွက်ကတော့ ဒီဘလော့ဂ်က ကွန်ထရီဗြူတာ အပျိုကြီးတွေဖြစ်တဲ့ စစ်ကိုင်းသူရယ်၊ မမေအောင်ရယ်ရဲ့ ဓာတ်ပုံပြတွေပြမယ်၊ ဂျီတော့မှာ သူတို့နဲ့ စကားပြောခွင့်ပေးမယ်။ ဟီးဟီး သူတို့ဆီကို ခွင့်မတောင်းဘဲ လုပ်လိုက်တာ အကြံမပိုင်လားဗျာ။ သဘောတူရင် လက်ခုပ်တီးပါဗျို့။
(ပြောလို့သာ ပြောရတာ ဒီအခွင့်အရေးတွေ ရမှာကြောက်ပြီး ဒီဘလော့ဂ်ကို လုံးဝအလည်မလာမှာလည်း ကြောက်ရသေးတယ်။)
အပျော်ရေးထားတာဆိုတော့ အပျော်ပဲဖတ်နော်။ မမတွေ ချိတ်ချိုးကြနဲ့နော်။
Posted by ဇနိ at 10:11 PM Links to this post 31 comments
အိပ်ယာက နိုးလာရင် ကျောင်းသွားရဦးမယ် ဆိုတဲ့အတွေးတွေနဲ့ မပျော်မရွှင်ဖြစ်သွားမိတယ်။ ဘယ်သူမှမရှိတဲ့ မနက်ခင်းစာကို ၀တ်ကျေတန်းကျေစားရဦးမယ်။ ပြီးတာနဲ့ ရထားတိုးစီးရဦးမယ်။ လမ်းတွေလျှောက်ရဦးမယ်။ မျက်လုံးပိတ်ပြီး လမ်းလျှောက်ရင်းနဲ့ ကျောင်းကိုသွားခဲ့တဲ့နေ့တွေ မနည်းခဲ့ပါဘူးဆိုတာ သတိရမိတယ်။ အခုတော့ ပြန်တွေးပြီး နည်းနည်းပြုံးလာနိုင်ပြီ။ အဲဒီရက်တွေကို လွန်မြောက်လာခဲ့ပြီ။ ကျွန်မရဲ့ မနက်ခင်းအိပ်ယာနိုးလာရင် စိတ်ပျော်ရွှင်မှု ရလာခဲ့ပြီ။
မနက်နိုးလာရင် ကျွန်မစိုက်ပျိုးထားတဲ့ အပင်လေးတွေ ပေါက်နေပြီလား။ အရွက်လေးတွေ ထွက်နေပြီလားဆိုတာ စူးစမ်းချင်စိတ်က အိပ်ယာမြန်မြန်ထစေတဲ့ အကြောင်းတခုဖြစ်လာခဲ့ပြီ ဆိုတာ သတိရမိတော့ တယောက်ထဲပြုံးမိလာပါတယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းကဆို အမေစိုက်ပေးတဲ့ အပင်လေးတွေကို အရွက်ထွက်လာပြီလား၊ ဘယ်လောက်ကြီးလာပြီလဲဆိုတာ မောင်နှမတွေ လုပြီး နေ့တိုင်းသွားသွားကြည့်ခဲ့ကြတာ သတိရမိပါတယ်။ ပြီးလျှင် ဘယ်အပင်က ဘယ်လိုဆိုတာ အမေ့ကို အလုအယက်ပြောကြမည်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ မလုရအောင် အပင်ခွဲတန်းချ မဲနှိုက်တာဝန်ယူ စောင့်ကြည့်ကြမည်ဟု သဘောတူခဲ့တာတွေကိုလည်း မမေ့နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်မကတော့ အမေစိုက်ထားတဲ့ ရှောက်ပင်၊ သံပုရာပင်လေးတွေကို သဘောအကျဆုံးဖြစ်ခဲ့တယ်။ အရွက်နုအသစ်ထွက်လာရင် ဘယ်လိုပျော်မှန်းမသိ ပျော်ရွှင်ခဲ့ဖူးတယ်။ မောင်လေးအကြီးကတော့ နေ့လည်အားလပ်ချိန်တွေဆို သူပိုင် သင်္ဘောပင်မှ သင်္ဘောသီး မမှည့်တမှည့် ခူးပြီး အတူစားဖို့ အမြဲစိတ်ကူးနေတတ်ပါတယ်။ မမှည့်တမှည့်ဆိုတာက သူ့အပင်ကို အမြဲကြည့်ပြီး နည်းနည်းဝင်းလာရင် ခူးတတ်လို့ ဘယ်တော့မှ အသီးမှည့်အောင် သူမစောင့်လို့ ပြောတာပါ။
အမေတို့က သူတို့မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့ကို သူတို့စိုက်ပျိုးလာတဲ့အပင်လေးတွေနဲ့တွဲပြီး မှတ်သားထားတတ်တယ်။ ကျွန်မကိုမွေးခဲ့တဲ့အချိန်က သားသမီးအဦးဆိုတော့ အဖေက သိပ်ပျော်ခဲ့တယ်တဲ့။ သမီးလေးမွေးပြီဆိုတာနဲ့ အိမ်ရှေ့မှာ အမှတ်တရ တမာပင်ပြေးစိုက်ခဲ့တယ်။ မောင်လေးအကြီးကို မွေးခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ အိမ်နောက်မှာ မန်ကျည်းပင်စိုက်ခဲ့ပါတယ်။ မောင်လေးငယ်ငယ်ကဆို မန်ကျည်းပင်နားသွားပြီး “သားနဲ့သူနဲ့ သားက အရပ်ပိုရှည်နေပြီ“လို့ ပြောတာမှတ်မိနေပါတယ်။ မောင်လေးအငယ်မွေးတဲ့အချိန်ကတော့ အမြွာလေးမွေးလို့ အဖေက ဧကရာဇ်ပင် ၂ ပင်စိုက်ခဲ့တယ်။ အခုတော့ မောင်လေးနဲ့ရွယ်တူ မန်ကျည်းပင်က မန်ကျည်းသီးတွေတောင် သီးတဲ့အရွယ်ရောက်နေပါပြီ။ သူတို့စိုက်ခဲ့တဲ့အပင်လေးတွေကိုမြင်တိုင်း အဖေနဲ့အမေက သူတို့ပြုစုခဲ့ရတဲ့ သားသမီးတွေကို သတိရတတ်တယ်တဲ့။
အိမ်မှာ သစ်ပင်စိုက်တုန်းကတော့ မျိုးစေ့လေးချပြီးရင် အညှောင့်ထွက်လာမှ စိတ်ချမ်းသာရတာပါ။ မျိုးစေ့အောင်ပါ့မလား။ မြေကကောင်းရဲ့လားလို့ အမြဲစိတ်ပူခဲ့ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့အိမ်က မြေတွေက နည်းနည်းမာတော့ စိတ်ပူရပါတယ်။ ဒီရောက်တော့လည်း ကျောင်းကပေးတဲ့ အဆောင်မှာ နေစဉ်က အပင်စိုက်ဖို့ သတိမရမိပါဘူး။ ဆိုင်တွေမှာ ပန်းအိုးတွေ တွေ့တော့လည်း စိတ်မ၀င်စားမိဘူး။ အခု ကိုယ်တိုင်ငှားနေတဲ့အိမ်မှာတော့ အေးအေးဆေးဆေး အပင်လေးတွေ စိုက်လို့ရတာရယ်၊ ကိုဇနိက သစ်ပင်လေးတွေစိုက်ရင် စိတ်ပျော်တယ်ဆိုတာရယ်နဲ့ စိတ်ထဲမှာ အပင်စိုက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေး ရောက်လာခဲ့တယ်။ အဲလိုတွေးတတ်လာတာနဲ့ ကျောင်းသွားရင် မျက်လုံးပွင့်ပြီး သွားချင်လာတယ်။ ဟိုငေးဒီးငေးလေးတွေ လုပ်တတ်လာတယ်။ အိမ်နဲ့ကျောင်းကို စက်ဘီးတောင် မစီးချင်တော့ဘူး။ လမ်းလျှောက်ရင် အပင်တွေငေးသွားရင် ဘယ်လိုရောက်သွားမှန်းတောင် မသိအောင် ဖြစ်လာတယ်။
ပန်းအိုးတွေ ဈေးဘယ်လောက်ပေးရတယ်၊ ဘယ်မှာဝယ်ရတာလဲဆိုတာကို အမတယောက်ကို ဖုန်းဆက်မေးလိုက်တော့ သူ့စိုက်ခင်းလေးကိုပါ ဓါတ်ပုံပို့ပေးတယ်။ မျိုးစေ့လေးတွေပါ ၀ယ်လို့ရတဲ့အတွက် အဆင်ပြေသွားပါတယ်။ အခုတော့ ပိစိညှောင့်အပင်လေးတွေကို နေ့တိုင်းအရိပ်တကြည့်ကြည့်နေရတာ ပျော်စရာလို့ သတ်မှတ်လာတယ်။ အိမ်တိုင်းလည်း ပန်းပင်လေးတွေ တော်တော်များများစိုက်ကြတယ်။ လမ်းဘေးတွေမှာလည်း စိုက်ကြတယ်။ မြေကြီးထုပ်လေးတွေကလည်း ယန်း ၁၀၀ ပဲပေးရပါတယ်။ မြေသြဇာပါပြီးသားဆိုတော့ ငယ်ငယ်တုန်းကလို အပင်ပေါက်ပါ့မလားလို့ မစိုးရိမ်ရတော့ပါဘူး။ ရက်လည်းမကြာဘဲ အပင်တွေကလည်း ဖွင့်ဖြိုးလှပါတယ်။ အခုမှအပင်ပေါက်လေးတွေကို ကျွန်မက အတော်သံယောဇဉ်တွယ်နေပြီဆိုတော့ အဖေ၊အမေတို့လို နှစ်ရှည်လများ ပြုစုပျိုးထောင်လာတဲ့ မိဘတွေဆိုရင် ဘယ်လောက်သံယောဇဉ်ခိုင်မာမလဲဆိုတာ တွေးကြည့်မိနေတယ်။ သူတို့ပြုစုခဲ့တဲ့အပင်လေးတွေ သူတို့မျက်စိရှေ့ရှိမနေဘူးဆိုရင် အရာရာအတွက် စိတ်ပူနေမလား၊ လွမ်းဆွတ်နေမလား၊ ဒါမှမဟုတ် သူတို့ပြုစုခဲ့တာလေးတွေ ရှင်သန်လာလို့ ဂုဏ်ယူနေမလားဆိုတာ စိတ်မှန်းဖြင့် တွေးတောနေမိပါတော့တယ်။
Posted by ဇနိ at 5:46 PM Links to this post7comments
Posted by ဇနိ at 12:45 PM Links to this post9comments
ဒီနေ့တော့ ရုရှားသီချင်းတပုဒ်ကို ဘလောဂ်မှာ တင်ပါ့မယ်။ နားထောင်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီသီချင်းကို ဂျပန်ဘာသာနဲ့လည်း ဆိုထားတာရှိပါတယ်။ သီချင်းလေးက နားဝင်ချိုပါတယ်။ မဇနိ ဂျပန်စာသင်တုန်းက အဲဒီသီချင်းလေးကို ကျောင်းမှာ သင်ခန်းစာအနေနဲ့ နားထောင်ရတယ်ဆိုတော့ ကျနော် အံ့သြသွားပါတယ်။ ကျနော် ရုရှားစာသင်တုန်းကလည်း အဲဒီသီချင်းလေးကို ဖွင့်ပြီး နောက်က လိုက်ဆိုရလို့ပါ။ ရုရှားစကားသင်ပေးခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးဆရာမကြီး Елена Александровна Романова ကိုလည်းလွမ်းမိပါတယ်။
သီချင်းကို မြန်မာလို ဘာသာမပြန်တော့ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လို ဘာသာပြန်ထားတာကိုပဲ ဖတ်ပြီးခံစားစေချင်ပါတယ်။
Once uponatime there was an artist.
He hadacottage and canvasses.
But He loved an actress.
Sold paintings and shelter.
Who is in love, in love, in love and serious.
Your heart goes cold.
But beneath the window, barely breathing.
Million scarlet roses.mp3 - Alla Pugacheva
ရုရှားသီချင်းစာသားဖတ်ချင်တဲ့သူတွေ အတွက်လည်း ရုရှားလို စာသားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်လိုလည်း နားထောင်နိုင်ပါတယ်။ ဂျပန်လို စာသားတွေလည်းတင်ပေးပါတယ်။
Million_scarlet _roses(japan rmx) -
ちいさい　いえと　きゃそばす　ほかにわ　なにも　ない
chiisai ieto kyasobasu hokaniwa nanimo nai
まずしい　えかきが　じょゆうに　こいをした
mazushii ekakiga jyoyuuni koiwoshita
だいすきな　あのひとに　ばらの　はなを　あげたい
daisukina anohitoni barano hanawo agetai
あるひ　まちじゅうの　ばらを　かいました
aruhi machijyuuno barawo kaimashita
＊　ひゃくまんばんの　ばらの　はなを
hyakumanbanno barano hanawo
あなたに　あなたに　あなたに　あげる
anatani anatani anatani ageru
まどから　まどから　みえる　ひろばを
madokara madokara mieru hirobawo
まっかな　ばらで　うめつくして
makkana barade umetsukushite
ある　あさ　かのじょは　まっかな　ばらの　うみを　みて
aru asa kanojyo wa makkana barano umiwo mite
どこかの　おかねもちが　ふざけたのだと　おもった
dokokano okanemochiga fuzaketanodato omotta
ちいさな　いえと　きゃそばす　すべてを　うって　ばらの　はな
chiisana ieto kyasobasu subetewo utta barano hana
かった　まずしい　えかきは　まどの　したで　かのじょ　を　みてた
katta mazushii ekaki wa madono shitade kanojyo wo miteta
ひゃくまんばんの　ばらの　はなを
あなたに　あにたに　あなたに　あげる
まどから　まどから　みえる　ひろばは
madokara madokara mieru hirobawa
まっかな　まっかな　ばらの　うみ
makkana makkana barano umi
であいは　それで　あわり　じょゆうは　べつの　まちへ
deai wa sorede awari jyoyuu wa betsuno machihe
まっかな　ばらの　うみは　はなやかな　かのじょの　じんせい
makkana barano umi wa hanayakana kanojyono jinsei
まずしい　えかきは　こどくな　ひびを　おくった
mazushii ekaki wa kodokuna hibiwo okutta
けれど　ばらの　おもいでは　こころに　きえなかった
keredo barano omoidewa kokoroni kienakatta
Youtube မှာလည်းရှာတွေ့လို့ ဗွီဒီယိုဖိုင်တင်လိုက်ပါတယ်...
Posted by ဇနိ at 4:14 PM Links to this post6comments
ကိုဇနိပို့စ်လေးဖတ်ရင်းနဲ့ ကျွန်တော်ဆက်ပြီး ကင်ပွန်းတပ်လိုက်ပါတယ်။
လူ့ဘဝ၏အစမှာ မွေးဖွားခြင်းဟုဆိုလျင် ထိုအစနှင့်ဆက်စပ်နေသော နောက်ဆက်တွဲမှာ မွေးလာသည့်ကလေးကို နာမည်ပေး ကင်ပွန်းတပ်ဖို့ပင်။ သာမန်အားဖြင့် ကလေးငယ်တစ်ယောက်ကို အမည်နာမတစ်ခုပေးလိုက်လျင်၊ ထိုအမည်မှာ ကလေးအဖို့ တစ်သက်လုံးပါသွားပေတော့မည်။ တချို့ကတော့ အခြေအနေအကြောင်းကြောင်းကြောင့် ကြီးလာမှနာမည်ပြောင်းကြသည်။ ငယ်ငယ်က ဘုန်းကြီးက ဗေဒင်ကိန်းခန်းအရ ”မတုတ်“ လို့ပေးထားခဲ့ပေမယ့် အရွယ်ရောက်တော့ ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကိုယ် နာမည်လှလှလေးရွေးကာ ”စန္ဒီတုတ်တုတ်” တို့ ”ဟန်နီတုတ်တုတ်” တို့ ဖြစ်ကုန်ကြသည်။ ထားတော့၊ ထိုထိုသောလူများမှာ အရေအတွက်အားဖြင့် အလွန်အင်မတန်နည်းပါသည်။ တချို့မှာလည်း မိဘကနာမည်ကောင်းကောင်းပေးထားပါလျက် အရပ်ထဲက ချစ်စနိုးဖြင့်ခေါ်သော နာမည်မျိုးက ပိုတွင်သွားတတ်သည်။ ”ကျွန်တော့်ကျောင်းနာမည်ကတော့ ပိုင်ဇေရဲထွန်းပါ၊ အရပ်ထဲမှာတော့ ငထွားလို့ခေါ်ကြပါတယ်” ဆိုလျင်လည်း သိပ်မဟုတ်သေး။
နာမည်ပေး၊ ကင်ပွန်းတပ်ရာတွင် အစွဲလေးတွေကလဲရှိတတ်သေးသည်။ ဘာစွဲ၊ညာစွဲစသည်ဖြင့် လူ့သဘာဝ မြင်မြင်ကရာစွဲတတ်ကြသည်။ အရပ်ဒေသကို အစွဲပြုခေါ်ဝေါ်သော အမည်နာမများလဲရှိသေးသည်။ အဖေက တံတားဦးမှာ လေယာဉ်ကွင်းပရော့ဂျက်နဲ့ ရောက်နေတုန်း သမီလေးမွေးတော့ ဒေသစွဲလေးနဲ့ နာမည်လေးပေးလိုက်တယ်၊ ”ကွမ်းနုဝါ”တဲ့။ မကွေးကိုပြောင်းရတော့ သားလေးထပ်မွေးတယ်၊ ”ဖန်ခါးမောင်”တဲ့။ ဂွမြို့တို့၊ ပေါင်မြို့တို့လိုမြို့တွေကို အဖေတာဝန်မကျလို့သာ၊ သူ့သားသမီးတွေသက်သာသွားသည်။ မဟုတ်လို့ကတော့ ”ဂွတို”တို့၊ ”ပေါင်ချိန်”တို့လိုနာမည်တွေ ပေါ်လာနိုင်သေးသည်။
အချို့အချို့သောအမေများကတော့ ရုပ်ရှင်အလွန်ကြိုက်သဖြင့် ကိုယ့်သားသမီးကို မင်းသား၊ မင်းသမီးနာမည်လေးတွေ ပေးကြသည်။ ”ရန်အောင်”ဟုပဲ ဆိုကြပါစို့။ ခွေးချစ်တတ်သူကလဲ သူ့ခွေးကို ချစ်စနိုးဖြင့် ”ရန်အောင်”ဟုခေါ်သည်။ ”ရန်အောင်ရေ” ဟုခေါ်လျင် ကလေးကလဲ ”ခင်ဗျာ”၊ ခွေးကလဲ ”ဝုတ်ဝုတ်”နှင့် ကလေးနှင့်ခွေးကြား ဇာတ်ရှုပ်ကုန်ကြတော့သည်။ ကိုယ်မပိုင်သည့် အမည်နာမဇာတ်ရှုပ်ကြီးပင်မဟုတ်တုံလော။ တချို့မိဘများကတော့ သားသမီးနာမည်များနောက်တွင် မိမိနာမည်ပါမှကြိုက်သည်။ ကိုဇနိပြောသလိုပင် အဖေနာမည် ”ဦးတောက်ကျော်”၊ အမေနာမည် ”ဒေါ်စိမ်းမြ”၊ သမီးနာမည်ကြတော့ ”စိမ်းမြမြတောက်တောက်ကျော်”၊ ဘယ်လောက်များလှလိုက်သည့်နာမည်နည်း။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ကျွန်တော်တို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်တော်တို့နှင့်အတူ ဒွန်တွဲကပ်ပါလျက်၊ သေလျင်တောင် အခေါင်းမှာရေးပေးရသည်မှာ အမည်နာမများပင်ဖြစ်သည်။
စာရေးဆရာ၊ အဆိုတော်၊ သရုပ်ဆောင်စသည့် အနုပညာရှင်များကတော့ ဒုတိယနာမည်ဟုခေါ်ဆိုနိုင်သော ကလောင်နာမည်လေးတွေပေးကြသည်။ လှမှလှ၊ ရွမှရွ။ တချို့ကလည်း ဗေဒင်ဆရာပေါင်းများစွာ၏အကူအညီဖြင့်၊ ခဏတွင်း အောင်မြင်နိုင်သည့် ကလောင်မျိုးကိုရှာကြသည်။ နာမည်ပေးအထူးဟောသည့်ဗေဒင်ဆရာကြီးများပင်ရှိသည်ဟုကြားဖူးပါသည်။ ဥာဏ်ပူဇော်ခမှာတော့ နည်းသည်၊များသည်မရှိ။ တောင်းသလောက်ပေးရသည်။ (စေတနာရှိသလောက် ကန်တော့ခိုင်းချင်းမဟုတ်ပါ) ဘာပွတ်ညာပွတ်နဲ့ပေးထားတာဆိုတာတွေကရှိသေးသည်။ ဗူးညွန့်၊ ဖရုံညွန့်စသည်ဖြင့် အညွန့်ပေါင်းများစွာဖြင့် မှည့်ခေါ်ကြသည်ကတစ်ဖုံ၊ မခက်တုံလော။ တချို့က နာမည်လှသလို အနုပညာဘဝလှသည်။ တချို့ကြလဲ နာမည်ပေး၊ ကင်ပွန်းတပ်သည့်ဆရာသာပြောင်းသွားသည်၊ ကိုယ်ရုပ်ရှင်မင်းသား (သို့) မင်းသမီးပါဆိုတာကို ကိုယ့်အရပ်ထဲကတောင် စုံအောင်မသိလှ။ ဒါမျိုးတွေလဲကြုံကြိုက်တတ်သည်။
ဟော ဒီခေတ်ကြီးထဲရောက်ပြန်တော့ online nick လေးတွေက ခေတ်စားလာခဲ့ကြပြန်ပြီ။ online မှာလဲ အပျင်းပြေစကားလေးကပြောချင်၊ နာမည်အရင်းကြီးနဲ့ပြောလို့ကလဲမဖြစ်။ အဲဒီတော့ nick name လေးတွေသုံးကြပြီပေါ့။ လူ့သဘာဝ အလှကြိုက်သည်မှာ nick name တောင်ချမ်းသာမပေး၊ လှလှလေးမှ သုံးချင်ကြသည်။ online မှာဆိုတော့ ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်လဲမလို၊ နာမည်ပေးဆရာကြီးတွေလဲလာရှုပ်လို့မရ၊ မိမိသဘောကျ ပေးချင်ရာပေးကြပေတော့။ ကင်ပွန်းတတ်ဆိုပြီး မုန့်ကျွေးဖို့မလို၊ သတင်းစာထဲလဲမထည့်ရ။ ဘယ်လောက်များ အဆင်လှလိုက်လဲ။ လူကိုမမြင်ဘူးကြတော့လဲ နာမည်လေးလှလျင် လူလဲလှမှာပဲဟု အတွေးရောက်တတ်ကြတာကိုး။ ရွာမှ “မိအေး“ တို့လဲ အွန်လိုင်းပေါ်ရောက်တော့ “cool_lady“ ဖြစ်လာသည်။ popular ဖြစ်သည့်နာမည်ဆိုလျင်တော့ အတော်ဒုက္ခရောက်သည်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က Tom Cruise ကိုအတော်ကြိုက်သည်။ ထို့ကြောင့် သူ့ nick name ကိုရွေးတော့ Tom Cruise နာမည်ကိုရွေးသည်။ သို့သော် အွန်လိုင်းမှာက Tom Cruise တွေမှိုလိုပေါက်နေသည်။ tom_cruise လို့ပေးလို့လဲမရ၊ tom_cruise2007 ကြတော့လဲ not available တဲ့။ စိတ်ရှည်လက်ရှည်ရွေးရင်း နောက်ဆုံးတော့ Tom Cruise နောက်က ဂဏန်းလေးငါးလုံးလောက်ထည့်လိုက်မှ အဆင်ပြေသွားသည်။ သူငယ်ချင်းက အဲဒီမင်းသားနာမည်သာ ပေးထားတာ၊ ရုပ်ကတော့ လက်ဝှေ့သမား Mike Tyson ရုပ်။ ရောမခေတ်က hero တွေ၊ သမိုင်းကသူရဲကောင်းတွေလဲ online ပေါ်မှာ တစ်စခန်းထလာကြသည်။ Minos, Odysseus, Poseidon, Loki, Odin စသည်ဖြင့်စုံလင်လှသည်။ လူကသာဖလံညောင်၊ ဂိမ်းထဲမှာ nick name ပေးထားတာက Poseidon တဲ့။
ကျွန်တော်လဲ သားလေး ဒါမှမဟုတ် သမီးလေးရလာလျင်တော့ စိမ်းမြမြတောက်တောက်ကျော်ထက်သာသည့်၊ ကွန့်သည်နာမည်မျိုး ပေးဖို့စဉ်းစားရဦးမည်။
Posted by မောင်ဖြူ at 9:25 AM Links to this post 8 comments
Posted by ဇနိ at 5:03 PM Links to this post9comments
Posted by စစ်ကိုင်းသူ at 4:03 PM Links to this post9comments
Posted by စစ်ကိုင်းသူ at 6:22 PM Links to this post 14 comments
Posted by မေအောင် at 7:22 AM Links to this post 12 comments
Posted by ဇနိ at 6:36 PM Links to this post 13 comments
Posted by ဇနိ at 2:01 PM Links to this post 19 comments